Arkiv - Publiceringar - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xeet ilaaliye: Waxay aheyd in Lars Nyberg falkaas ka hortago
Shirkadda Telia oo lagu eedeeyey in laaluushka ay bixisey yahay mid ay ku talagashey.
Maxkamadda rafcaanka oo laba nin xukun hore ka khafiifisey
Maxkamadda rafcaanka oo laba nin xabsi ka khafiifisey midna u kordhisey
Maxkamadda rafcaanka ayaa maanta go’aamisey in ay khafiifiso xukun hore oo laba nin lagu ridey kaas oo la xiriirey qarax bumbaano oo ka dhacey Göteborg, nin saddexaadna waxay ku sii adkeysey xukunkii horey ugu dhacey.
Maxkamad lagu soo oogey 3 qof oo shirkadda Telia madax ka ahaa
Madax sare oo Telia ka tirsanaan jirey oo danbiyo lagu soo oogey
Waxaa maanta danbi lagu soo oogey saddex qof oo horey ugu shaqeyn jirey shirkadda Telia Sonera uuna ka mid yahay mareeyihii hore ee shirkaddaas Lars Nyberg.
Torsdag 21 september kl 15.09
Ulf Kristersson oo loo soo sharaxay hogaanka cusub ee xisbiga (M)
Waaxda xisbiga Modaraad-ka u qaabilsan diyaarinta doorashooyinka ayaa soo jediyey in hogaamiyaha cusub ee xisbigooda loo magacaabey Ulf Kristersson, sida uu sheegey madaxa waaxda diyaarinta doorashooyinka Lars-Ingvar Ljungman.
Torsdag 21 september kl 13.15
Torsdag 21 september kl 12.35
Stefan Löfven oo UN-ka ka hadley lana kulmey Donald Trump
Stefan Löfven oo khudbad ka jeediyey UN-ka.
Reysal wasaaraha Sweden Stefan Löfven ayaa khudbad ka jeediyey golaha amniga ee qaramada midoobey.
Torsdag 21 september kl 11.34
Wallström oo abaalmarin lagu guddoonsiiyay UN -ka
Margot Wallström (S), wasiirka arrimmaha dibadda Sweden oo bilad sharaf ay ku siisay magaalada New York laanta caalamiga ee hayadda qaramada midoobey ee haweenka.
Torsdag 21 september kl 09.59
Wasiirka cadaaladda iyo taliyaha booliska oo baarlamaanku u yeerey
Guddi hoosaadka baarlamaanka Sweden u qaabilsan arrimaha caddaaladda ayaa maanta wareysi ugu yeerey taliyaha ciidamada booliiska Dan Eliasson iyo wasiirka caddaaladda Morgan Johansson.
Torsdag 21 september kl 08.58
Go’aankii baryada ee degmada Vellinge oo laga dacwoodey
Degmada Vellinge oo maamulka ka taliyaa uu u codeeyay in la mamnuuco barayada (tuugsiga) ayay dacwad ka dhan ah ka gudbiyeen ururka u dooda xuquuqda bani’aadamka Civil Rights Defenders.
Onsdag 20 september kl 13.20
Xisbiyada Mucaaradka oo canbaareeyay miisaaniyadda
Xisbiyada mucaaradka oo canbaareeyey miisaaniyadda dawladdu soo bandhigtey.
Xisbiyada mucaaradka ayaa dhaliiley miisaaniyadda ay dawladdu maanta soo banhigtey.
Onsdag 20 september kl 11.54
Waa miisaaniyad la soo bandhigey xilli dhaqaale wanaagsan
Dood la xiriirta miisaaniyadda
Miisaaniyadda dhaqaalaha ee dalka oo saaka la soo ban-dhigey ayay ka muuqatay inuu dalku ku jiro xaalad dhaqaale ee sarreeysa, sida uu sheegay Abshir Anbaashe oo ka tir-san xisbiga Moderaterna iyo Mubaarik Abdirahmaan oo ka tir-san xisbiga Socialdemokraterna.
Miisaaniyadda xilliga deyrta oo maanta la soo bandhigey
Onsdag 20 september kl 10.40
Dawladda ayaa maanta soo bandhigtey miisaaniyadda dalka lagu dhaqi doono 2018.
Abshir: Waa miisaaniyad xilli dhaqaale wanaagsan
Onsdag 20 september kl 10.00
Tisdag 19 september kl 16.20
War-bixin muhiim u ah bulshada reer Sollentuna ee Stockholm.
Wuxuu dab sababay qaac badan uu ka kacayaa nawaaxiga shirkadaha Kronåsen.
Tisdag 19 september kl 13.47
Peter Hultqvist oo ka badbaadey in kalsoonida lagala laabto
Baarlamaanka Sweden ayaa maanta cod u qaadey wasiirka gaashaandhigga Peter Hultqvist. 135 xildhibaan ayaa u codeysey in wasiirka kalsoonida lagala laabto meesha ey 137 xildhibaana u codeysey diidmada arrinkaas.
Flera nyheter från Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen
Twitter nagala soco
Wararka aan ku Daabacno Bogga Internetka
Bogga internetka ayaannu maalin walba isniinta illaa iyo jimcaha aannu war-bixinno hor leh ku daabacnaa laga bilaabo 9:30 illaa iyo 17:30. Wixii intaa dhaafsiisan waxaad wararka ka daalacan kartaan bogga internetka ee ingiriiska engelska . Sidoo kale waxaad af iswiidhishkana kaga boggan kartaan wararkiina bogga idaacadda wararka ee ekot .
Idacadda SR iyo Radio Sweden
Idaacadda Iswiidhen waa shirkad ku dhisan xayeeysiin la’aan iyo afkaar madax-bannaan, hoowsheeduna tahay sidii dhageeysyeyaasha da’ walba iyadoon loo aabba yeeleeyn jinsiga uu ruuxu yahay rag iyo haween, dhaqanka uu ka soo jeedo iyo waddanka uu asal ahaan u dhashay